Eserese nke Onye Ahịa Ahịa | Martech Zone
Eserese nke Onye Ahịa Ahịa
Satọde, 7 Juun 2014 Fraịdee, June 6, 2014 Douglas Karr
Teknụzụ ekwentị na-agbanwe ihe niile. Ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa, nweta ntuziaka, na-agagharị na weebụ, soro ndị enyi na-emekọrịta site na ụdị mgbasa ozi dịgasị iche iche, ma jiri ndụ otu ngwaọrụ pere mpe dee ndụ ha. Site na 2018, atụmatụ 8.2 ijeri ngwaọrụ mkpanaaka ga-arụ ọrụ. N'afọ ahụ, a na-atụ anya azụmahịa azụmahịa ka ọ bụrụ ihe ruru ijeri $ 600 na ahịa kwa afọ. N’ụzọ doro anya, usoro azụmahịa ọgbara ọhụrụ na-agbanwe agbanwe; na ụlọ ọrụ ndị na-anabataghị ahịa ahịa ekwentị ọhụrụ ga-ahapụ n'oge na-adịghị anya.
Kwa afọ ka ndị na-azụ ahịa na-enwe mmekọrịta chiri anya ma na-adabere na ekwentị ha, mbadamba, na laptọọpụ ha, ụwa na-eri nri ka ukwuu nke teknụzụ ekwentị. Omume a na-emewanye ngwa ngwa na-enye nnukwu ohere maka ndị ahịa, ndị na-eme nchọpụta ahịa na azụmaahịa. Ndị ahịa ọ bụla jikọtara na ntanetị zuru ụwa ọnụ ma na-enwe mkparịta ụka mgbe niile na mkpanaka ha, ụlọ ọrụ nwere ike ịbịakwute ndị ahịa ha n'ọkwa nke onwe ha, na n'ụzọ aghụghọ na-esiwanye ike.
Otú ọ dị, ime nke ahụ chọrọ nghọta miri emi banyere ụzọ ndị mmadụ si eji mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ eme ihe. Inweta nghọta a dị mkpa chọrọ nnyocha. Yabụ iji bulie ọgụgụ akwụkwọ ọgụgụ ekwentị gị ma nweta eziokwu banyere teknụzụ na-achịkwa ụwa azụmahịa taa, Ulo olu emeela ka akụkọ banyere eziokwu na ọnụ ọgụgụ jikọtara ọnụ gbasara etu esi azụ ahịa ekwentị na-akpụzi. O nwere ike gbanwee etu ị si azụ ahịa.
Tags: azụmahịa obodom-azụmahịaazụmahịamobile ohereMobile na Mbadamba ụrọmobile ngwa ọdịnalaọdịyo ekwentịdata igwe ojiingwa ahiaekwenti mkpanakaKupọns ekwentịdata ekwentịmobile faịlụ nkekọrịtaiguzosi ike n'ihe mobileekwentị mkpanaaka m2mmobile nyiwevideo mkpanakaobere akpa mkpanakaweebụ mkpanakaretailndepụta
Kedu ihe ekwuputara na ikike ikike?